Kooxda Barcelona oo Funaanadeeda ku Daabacday Calaamada Saliibka, iyo Sababtaasi oo la shaaciyay | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Kooxda Barcelona oo Funaanadeeda ku Daabacday Calaamada Saliibka, iyo Sababtaasi oo la...
Kooxda Barcelona oo Funaanadeeda ku Daabacday Calaamada Saliibka, iyo Sababtaasi oo la shaaciyay
Waxaa durbaba la sii nashqadeynayaan maaliyadaha ay Barcelona ku dheeli doonto xilli ciyaareedka soo socda ee 2022/23, iyadoo nashqada maaliyadooda seddexaad ay durbaba dood ka dhex dhalisay taageerayaashooda.
Taageerayaasha kubada cagta ayaa inta badan difaac ka gala waxyaabo ay u arkaan inay yihiin lama taabtaan oo la xiriira kooxdooda gaar ahaan marka ay ku lug leeyihiin koox ay xafiiltamaan.
Jamaahiirta Real Madrid ayaa heli doona wax ay ku qoslaan haddii Barcelona ay ku soo shirtagto maaliyad cadaan ah xilli ciyaareedka danbe.
Sida ay sheegtay jariirada Barcelona ka soo baxda ee Mundo Deportivo, maaliyada seddexaad ee Barcelona waxay noqon doonaan mid cadaan ah oo ah midabka lagu yaqaano kooxda ay cadowga yihiin ee Real Madrid.
Laakiin marka laga soo tago maaliyada inay cadaan tahay, waxaa iyadana muran ka taagan yahay caalamaada saliibka ah ee weyn ee maaliyada xabadka looga dhejiyay. Waa calaamada saliibka ah ee ku dhex jirta astaantooda oo la sii weyneeyay.
Waxay ku xardheen midabkooda ay caanka ku yihiin ee casaanka iyo buluuga. Laakiin madaama Barcelona ay taageerayaal aad u badan ku leeyihiin wadamada Bariga Dhexe oo Muslimiin ah waa ay adkaan doontaa inay maaliyadaan ku iibiyaan dalalkaas.
Calaamada saliibka ah ee ka dhex muuqata astaanta Barcelona waa mid ay ku xusaan nin ay gaalada weyneyso oo la dhihi jiray Sant Jordi.
Previous articleGolaha Ammaanka QM oo WAR kasoo saaray khilaafka FARMAAJO iyo ROOBLE
Next articleChelsea oo Qorsheeneysa inay iska iibiso Daafaca Antonio Rudiger